မေဇင်အဖုတ်ရည်ရွှဲ💖 – Grab Love Story
သူမရဲ့ နုညံ့တဲ့ အသားအရေနဲ့ မစိုစလောက်အနည်းငယ်ဝနေတယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုအလှပိုင်ရှင်မိန်းမတယောက်ပေါ့..။၁၅ပေါင်ခန့် ဝိတ်ချထားပြီးဘော်လ်ဒီကိုပြန်ထိန်းထားတာ မကြာသေးပါဘူး။ မေဇင်တယောက်အတော်လေးကြိုးစားလိုက်ရတာပေါ့။ မိန်းမတစ်ယောက် အတွက် ဝိတ် ၁ပေါင်ချဖို့ဆိုတာ တကယ်ကိုမလွဲတဲ့ ကိစ္စပဲလေ…ယောကျာ်းလုပ်သူ ကိုအောင်မင်းကတော့ မေဇင့်ကို လိုက်လို့ မယှဉ်နိုင်တော့ဘူး …အရမ်းဝလာတော့ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် သိပ်မထိရောက်သလို ဖြစ်နေရောကိုအောင်မင်းဆိုတဲ့လူကအစားအသောက်ကလဲကျူးတာကိုပေါင်၂၀၀လောက် ခန္ဓာကို အလေးချိန်ရှိတဲ့ တကယ် ၀က်ကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ မေဇင် ကိုအောင်မင်းကို ချစ်နေဆဲပါ ကိုအောင်မင်းကလဲ မေဇင့်ကိုချစ်နေဆဲပါပဲ..တယောက်ကိုယောက်တော့ သစ္စာလုံးဝ မပျက်ဖူးသေးတဲ့ တကယ်သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါ့အားကစားပုံမှန်လုပ်တဲ့ မမေဇင်ကတော့တနေ့တခြား သွေးသားလည်ပတ်မှုတွေကောင်း… နေလို့ထိုင်လို့ကောင်း နဲ့ မိမိကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေရှိပြီးကို့ကိုအပျိုလေးတယောက်လို သွက်လက်မှုတွေ ခံစားလာရတဲ့အချိန်တွေမှာ။ ကိုအောင်မင်းတစ်ယောက်အတွက်တော့ ပိုဝသထက်ဝြပီး အလုပ်တဖက် နဲ့ ငွေနောက်ပဲလိုက်နေတော့ ဖိအားတွေများလာတယ်….…နောက်အရေးကြီးဆုံးတခုက သူ့ဇနီးချောလေးအပေါ် လိင်ကိစ္စမှာ ဆန္ဒပြည့်ဝအောင် မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတကွ် သူ့ကိုသူ နောင်တလရဲ နေလေရဲ့..ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေး ကိုအောင်မင်းခမျာသူ့ကိုသူတောင်အနိုင်နိုင်ပါ …စဉ်းစားကြည့်ပါ မိန်းမဆိုတာမျိုးကလဲ လင်ယောကျာ်းလုပ်တဲ့ လူကိုဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဒီလို လိင်မှုကိစ္စမှာ ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ ယောကျာ်းတယောက်ကိုဘယ်အတိုင်းအတာထိစိတ်ရှည် ပေးနိုင်မလဲ ဆိုတာကိုပါ။ မေဇင်ခမျာ လိုနေတဲ့ ဆန္ဒမီးကြီးကိုမငြိမ်းသတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးအရမ်းကို စိတ်ဒုက္ခတွေ ရောက်နေရှာတော့တယ်။
ဒါကလဲ မေဇင့်လိုမိန်းမတယောက်ထဲ မဟုတ်ပါဘူး …အခုခေတ် စီးပွားရေးဆိုတာကလဲ ကိုမှအပြိုင် မကျဲနိုင်လျင်အမြတ်အစွန်းဆိုတာကို့အတွက် ကျန်ဖို့မ မရှိတာ …လူတိုင် ဒီလိုပဲ ငွေနောက်ကိုလိုက်နေရတာဘဲ..မလိုက်နိုင်ရင်တော့ ဒီလိုခေတ်ကြီးထဲ အစစအရာရာ ပြည့်စုံတယ်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလေ.။လူတွေက ရောင့်ရဲတင့်တိမ်နိုင်ခြင်းကိုမရှိတော့ပါဘူး …ကိုအပါအ၀င်ပေါ့…ဟီဟီဒါပေမဲ့ မိသားစုအတက်ွလဲ အချိန်တော့ ပေးကျရမယ်လေး။ ဒီလိုနဲ့အတူတူနေလာတာနှစ်တွေလဲကြာပါပြီ….ကိုအောင်မင်းဟာ ကုမ္မဏီပိုင်သူဌေးပါတနေ့လုံး ကုမ္မဏီရုံးခန်းထဲထိုင်ပြီး ညနေ မှအိမ်ကိုပြန်ပါတယ်….မမေဇင် ကတော့သူမသူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့၅နှစ်အရယွ် ကလေးငယ်တဦးကိုထိန်းပြီး အိမ်မှာပဲလုပ်စရာရှိသည်များကိုလုပ်ရင်းနေ့ရက်တေကွို ဖြတ်တန်းနေတ့သဲူပါ။နောက်ပြီး စာရေးဆရာမ တယောက်ဖြစ်ဖို့လဲအိမ်မက်ထားသူပေါ့…ကစ်ကစ်ကို သူ့သားလေးတယောက်လိုပြုစုလို့ ကစ်ကစ်အိပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာစာအုပ်ဖတ်.ခွေထိုင်ကြည့်ကလေးကိုသူ့အဖေအရင်းကယူထားတဲ့…..အချိန်တွေဆိုရင်တော့..ရှော့ပင်ထွက်..အလှပြင်ဆိုင်သွား..ဒါတွေလုပ်ရင်းနဲ့ပဲ ကိုအောင်မင်းကသူ့မိန်းမကိုလိုလေသင်းမရှိအောင်ထားတာပေါ့။ သူများကလေးကို ထိန်းပေးရတာကလဲမေဇင်အတွက်ပြသနာမဟုတ်ပါဘူး…ဘာလို့ဆို မေဇင်တို့ လင်မယား ကလေးမရဘူးလေ မေဇင်ပဲလိုတာလား ကိုအောင်မင်းပဲ ချွတ်ရွှန်းနေတာလာ မပြောတတ်…ဒါပေမဲ့လင်မယားသက်တန်း၅နှစ်၆နှစ်အတငွ်း မေဇင် ကိုဝန်လုံးဝမရခ့ဖဲူးဘူး…ကစ်ကစ်လေးကလဲ တခြားသူကလေးတော့ မဟတ်ုပါဘူးသူငယ်ငယ်ကနေတက္ကသလိုရောက်တ့အဲ ထိ ဘော်ဘော်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းလြဲဖစ်တဲ့တင်ထွေးငယ်ရ့ကဲ လေးပါ။တင်ထွေးငယ်ဟာဒီကလေးမွေးပြီး၂နှစ်လောက်ပဲရိ်ှအုံးမယ်ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆုံးပါးသွားရှာတယ်။ ကစ်ကစ်ကိုသူတို့လင်မယားမွေးစားဖို့ ဖအေဖြစ်သူ ကိုငြိမ်းဝင်းကိုပြောကြည့်ဖူးပါတယ်…ဒါမေမဲ့ကို ငြိမ်းဝင်းလုံးဝ လက်မခံပါဘူး။ ဒီကလေးမှာ တင်ထွေးငယ်ရဲ့အငေ့အွ သက်တွေအများကြီးပါနေတယ်တော့ကာကျွန်တော့ကလေးကို အမွေစားအမွေခံအပိုင်မွေးစားခိုင်းဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေကို ပဲသူတို့ရပါတယ် ။
ဒါကလဲဟုတ်တယ်ကစ်ကစ်ရ့မျဲက်နှာပေါက် အသားအရေဟာမတင်ထွေးငယ်နဲ့ တထေရာထဲရယ် …ကိုငြိမ်းဝင်းဆိုတဲ့လူကမိန်းမကိုအလန်ွချစ်တတ်တ့လဲူပါ။ ပြောတာပြောတာပါ ဒီကလေးက မမေဇင်တို့အိမ်မှာပဲ ၁၂လလုံး နေ့တိုင်အမြရှဲိနေတာပ…ဲ ကလေးအဖေဖြစ်တဲ့ ကိုငြိမ်းဝင်း တယောက် တင်ထွေးကြည်ဆုံးသွားကတဲ့ကအရက်တွေအလွန်အကျွံသောက်ပြီး အရက်သမားလုံးလုံးဖြစ်လို့နေလေရဲ့ ။ မိန်းမကို အလွန်ချစ်တဲ့လူဆိုတော့လဲ တသက်လုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ အသိကြီးကို ကိုငြိမ်းဝင်တယောက် မခံစားနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒီလိုတွေဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတော့ ..ကို့ကိုယ်ကို ပြန်အရောင်တင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစာမိသွားခ့တဲ ယ် ..လူကောင်းပြန်ဖြစ်ချင်လာတာကလဲ သူ့သမီးလေးကစ်ကစ်ကြောင့်လို့ ပြောရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်လေး သူ့မှာသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသေးတဲ့ဟာ…သူမကိုပြုစုပျိုးထောင်ရမယ်..လူအများကြားမှာ ကို့သမီးလူရာဝင် အဆင့်အတန်းရှိအောင် ထားဖို့ဆိုရင် ဒီပုံဆံနဲ့သူ့သမီးကိုအများက့ရဲ့မှာပေါ့။ သူ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကျပုံမျိုးနဲ့ ..ဘယ်လလိုပ်ဒါတွေလုပ်နိုင်မလဲ။ ကိုငြိမ်းဝင်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီး ပေတေနေလို့ သူ့စီးပွားရေးကိုတော့ မထိခိုက်ခဲ့ပါဘူး။ကိုငြိမ်းဝင်ဟာအတော်လေးချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သူဌေးသားပေါ့ ။ သူဒီလို့ အချိန်တွေအများကြီးကိုအရက်နဲ့ အချိန်ကုန်နေခ့ေဲ ပမဲ့ သူ့ရဲ့ ကြယ်ွဝမှုကတော့ အပျိုရေတောင်မပျက်ဘူးပေါ့လေ…နောင်တရချိန်စောတယ်လို့ပြောရမှာပဲ ကိုငြိမ်းဝင်း သူ့ကိုသူပြုပြင်နိင်ခဲ့ပါတယ်။ မေဇင်တို့လင်မယားကလဲအမြဲလို ဆုံးမ တိုက်တွန်းနေတော့ …အကောင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ မေဇင်နဲ့ကိုငြိမ်းဝင်းတို့ ကြားမှာ ဘာမှမရှိပါဘူး …တယောက်အတွင်းကိစ္စ တယောက်သိဆိုတော့ …တဦးပေါ်တဦးလဲနားလမှဲုတေအွ လန်ွရှိတဲ့မိတ်ဆေအွ ဆင့် ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့တယောက်သောသူကတော့။ကိုအောင်မင်းတယောက်ကတော့ တနေ့ထက်တနေ့ သူ့အိမ်နဲ့အလှန်းဝေးလို့လာပါတယ်။
ကုမ္မဏီကိစ္စနဲ့ခရီးတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို ထွက်ရတော့တာပဲ ။တည…ညလယ်ယံကြီးမှာ မေဇင် တယောက်အိမ်မက်မက်နေရင်းက ရုတ်တရက် ငေါက်ကနဲထထိုင်နေပါတယ်…ဘေးကြည့်တော့ လင်တော်မောင် ကိုအောင်မင်းတယောက် ဆင်အော်မနိုးကုလားသေ ကုလားမောအိပ်နေလေရ့။ဲ သူမဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို လင်တော်မောင်တယောက် ဘယလ်ိုမှသိနိုင်မယ်မထင်ဘူး…ဒေါသကလဲထွက် ရမ္မက်စိတ်တွေကလဲပူလောင်နဲ့ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညနက်ကြီးထဲမှာ အသက်ရှူနှုန်းတွေကလတဲ ဖြည်းဖြည်းနြဲ့မန်လာလို့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မေဇင့်အဖြစ်ကို တလောကလုံးက သိဖို့နေနေသာသာဘေးမှာအိပ်နေတဲ့ လင်ယေကျာ်းကတောင်မသိရှာဘူး။ ဒါကို မေဇင် ၀မ်းလဲဝမ်းနည်း ကို့အဖြစ်ကိုလဲသနားနှာမှတ်သံက တရှူရှူနဲ့သနားစရာ သတ္တဝါမလေးကိုဖြစ်လို့… လင်တော်မောင်ကို နိုးလို့မေဇင့်ကိုလုပ်ပါအုံးကိုရယ်လို့ ပြောရအောင်ကလဲမဟုတ်သေး…ဒါနဲ့ ကို့ဟာကိုယ်ပဲပြီးအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆုံးဖြတ်ကား အိပ်ယာပေါ်ပြန်လဲချလိုက်ပါတယ်…လက်တဖက်ကို ည၀တ်အိင်္ကျီအပါးလေးသာဖုံးထားတဲ့ညာဖက်နို့အုံလေးကို ဖွဖွညစ်ရင်း ည၀တ်စကပ်ပါးလေးအောက်က။ရမ္မက် အရှိန်ကြောင့် ချော်ဆီအရည်ကြည်လေးတွေထွက်ပြီး စိုစွတ်လို့နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးရှိရာကို ကျန်လက်တဖက်ကနိုက်ထည့်ပြီး အပေါ်အောက်ဘယ်ညာ ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲပွတ်လိုက် အရမ်းဖိပြီးပွတ်လိုက်နဲ့ …တချိန်ကိုအောင်မင်းစွမ်းခ့ချဲိန်က ယုယမှုတေကွို အရုံပြုလို့ ကာမဆန္ဒရဲ့ လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကို တယောက်ထဲကြိုးစားလို့ ချီတက်နေရှာတော့တယ်..။
အင်း…အင်း ဆိုတဲ့ အသံတဲတဲလေးကိုတော့ သူကိုတိုင်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး….အလွန်ညင်သာပြီး ဖြည်းညင်းတဲ့ စီးချက်တွေနဲ့ သူမတစ်ယောက်ထဲကြိုးးစာလို့ ..ဖြေသိပ်နေရရှာတာပါ။ “ အင်း….အင်း…ဟင့်…အင်း..” ဆိုပြီး အသံ ဗော်လွန်းလေးတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီး အင်းးးးးးးးဆိုတဲ့ သံဆွဲလေး နဲ့ ရုတ်တရက် မေဇင်တယောက်ငြိမ်ကျသွားတော့တယ်…။သူမပြီးသွားပါပြီ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမသားတယောက်အဖို့လင်တော်မောင်ဘေးနားမှာရှိလျက်နဲ့မှန်းပြီး စိတ်ကူးနဲ့ ဖြေသိမ့်လိုက်ရတဲ့ သူမရဲ့ ဖြေသိမ့်မှုဟာဘယ်လောက်ထိ ပြည့်ဆုံချင်းရှိမှာသတ့လဲ ။ဲ ဒီလိုန့မဲ နက် မိုးလင်းလို့ တခါအလင်းရောက်ခြဲပန်ပါပြီ … မေဇင့် မျက်လုံးလေးတွေမှိတ်လျက်နဲ့ကိုအောင်မင်းကို လှန်းဖက်လိုက်ပါတယ်။ ဘာမှမရှိပါဘူး ကိုအောင်မင်းအိပ်တဲ့ဖက်ခြမ်းကစောင်လေးကိုပဲသွားကိုင်မိလိုက်ပါတယ်… ကိုအောင်မင်း ထသွားပါပြီ။ဒါနဲ့ မျက်လုံးလေးဖွင့်လို ခေါင်းရင်းကစာကြည့်စာပွကဲ ကိုအောင်မင်း ထာခ့တဲ့စာတိုလေးကိုလှန်းယူပြီးဖတ်ကြည်လိုက်တယ်“မေ ကိုဒီနေ့မန္တလေးကိုသွားလိုက်ပြီ..မနက်ဖြန်ပြန်လာမယ်…ချစ်တဲ့ ကိုအောင်” ကိုအောင်မင်း တယောက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့မန်းလေးကို သွားပါပြီ ။ ထူးခြားမှုမရှိတဲ့ နေ့တနေ့ကို ထပ်ပြီးဖြတ်တန်းရအုံးမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတွေးရင်ပြန်မေးဆက်ဖို့ မျက်လုံးတွေပြန်မှိတ်ပြီး ခဏမှာပဲ….စာကြည်စာပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ သူမဖုန်းလေးတုံခါလာတော့တယ်…. သီချင်သံတွေ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လို့ပေါ့။
ဒါနဲ့ ဖုန်းကိုကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်တော့ ကိုငြိမ်းဝင်းစီကဖုန်းလေးဝင်နေတာပါ။ ကစ်ကစ်လေးကို မမေဇင်စီလာထားဖို့ဖုန်းလှန်းဆက်တယ်စိုတာ မေဇင်သိလိုက်ပါပြီ..“ မောနင်း ..ကိုငြိမ်း…ကလေးလာထားတော့မလို့လာ”“ဟုတ်တယ် မေဇင် …ကလေးက အခုအိပ်ပျော်နေသေးတယ်သိလာ။အဲဒါအကိုချီလာလိုက်မယ်…မေဇင်ကော နိုးသေးရ့လဲာ..အနောက်ရှက်များ ဖြစ်သွားလား..မသိဘူးမေဇင်ရေ…”“ အို့….မဖြစ်ပါဘူး ကိုငြိမ်းရယ် မေဇင်ထနေပါပြီ ..ခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါ”“ဒါဆို ကိုလာပြီနော် ..မေဇင်” ကိုငြိမ်းဝင်း ကတော့ မေဇင်နဲ့ စကားပြောရင်းအမြဲ ရွှင်ရွှင်ပျပျမြူးမြူးကြွကြွပဲပြန်ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ မေဇင်လဲ အိပ်ရာပေါ်က အလူးအလထဲ ည၀တ်အိင်္ကျီနဲ့ ဆကပ်တိုကို ကွင်းလုံးပုံချွတ်လို့ကိုလုံးတီန့ဘဲာဝတ်ရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားရင်း အ၀တ် ဗီရိုကို မွေနေပါတော့တယ်။ ဆကပ်တို အိင်္ကျီပါးန့ေဲ တာ့ ကိုငြိမ်းဝင်းကို ထွက်တွေ့ဖို့မဖြစ်နိုင် ဒါကြောင့် ည၀တ် ပဂျားမတ်စ်အပေါ်အောက်စင်တူကောက်ဝတ်လိုက်ပါရော…မကြာဘူး အိမ်ရှေ့ ဘဲလ်တီးသံကြားလို့ အိမ်အောက်အပြေးစင်းပြီး တံခါးဆွဲဖွင့် လိုက်တော့ …ကိုငြိမ်းဝင်းနဲ့သူ့လက်ပေါ်အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကစ်ကစ်တို့ရောက်နေကျပါပြီ။ကိုငြိမ်းဝင်နဲ့ ကစ်ကစ်ကိုပြုံးပြလို့နှုတ်ဆက်ကြိုနေရင်းက မေဇင်တယောက် ရုတ်တရက်ဆိုသလို တွေတွေကြီးကြည့်ပြီးမှင်သက်မိနေပါတယ်။ဒါကိုကိုငြိမ်းဝင်းက “ မေဇင် ကိုငြိမ်းတို့ ဘာများဖြစ်လို့ လဲ..ဘာများလိုအပ်နေလို့လဲမသိဘူးနော်”ကိုငြိမ်းဝင်လဲမေဇင် သူန့ကဲ လေးကို ဆူးဆိုက်ကြည့်နေတာကို သတိထားမိပြီး …သူတို့ဘာများလိုအပ်နေသလေဲ ပါ့…မေဇင်တလဲ့ကို့ကိုယက်ိုတလဲ့ ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။
ဒါနဲ့ မေဇင် သတိပြန်ဝင်လာပြီး“ အော်…ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုငြိမ်း လာလာအိမ်ထဲဝင်”ကလေးကို မေဇင် လက်လွဲယူလိုက်ပြီး …အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုလေးပုခက်မှာ သွားသိပ်ထားလိုက်တယ်။မေဇင်အခန်းထဲဝင်လာတော့ …ကိုငြိမ်းဝင်းဆိုဖာပေါ်ထိုင်နေရင်းကနေ မေဇင်မျက်နှာကိုကြည်ပြီး“ မေဇင်အခုမှထတာလာ…ဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းဘူးလာ”“ နေမကောင်းတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကိုငြိမ်း …နဲနဲ အားပျော့သလို အားမရှိသလို တမျိုးလေးဖြစ်နေတာ…အဲလိုကြီး အားမရှိတာလဲမဟုတ်ဘူး…ဘယ်လိုပြောရမလဲ…ခစ်ခစ်” ရီရင်းပြန်ဖြေသည်သူမဘာဖြစ်နေသည်ကို…သူမမှလွဲရ်ျ ကိုငြိမ်းဝေ သိနိုင်မယ်မထင်ဘူး…။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ..ရီလိုက်ကျပြီး နှစ်ယောက်သား ခေတ္တတိတ်ဆိတ် သွားကျတာပဲ…ကိုငြိမ်းတစ်ယောက် အစော ရွှင်ပျနေသောမျက်နှာမှာ ရုတ်တရက် ညိုးကျသွားပြီး ကြမ်းပျင်ကိုငုံ့ကြည့်နေနေတော့…မေဇင် ကိုငြိမ်းဝင် ကိုတချက်အကဲခက်ကာ ဆုပ်ထားတဲ့ ကိုငြိမ်းဝင်းလက်များကို သူမလက်နုနုလေးဖြင့် ညင်သာစွာ အုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်။“ ကိုငြိမ်း မနေ့က ထွေး ငယ်ဆုံးတာ ၅နှစ်ပြည့်တ့ေဲ န့နော်”“ ဟုတ်တယ် မေဇင်” ကိုငြိမ်းပြန်ဖြေသည်“ကိုငြိမ်းဒီလို လိမ်လိမ်မာမာနဲ့ ကစ်ကစ်ကို ကောင်းကောင်းပြုစုပေးနေတဲ့ အတွက် ထွေးငယ် ကိုငြိမ်းကိုတမလွန်ကနေ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ ကိုငြိမ်းရယ်..၀မ်းမနဲပါနဲ့နော်..ကိုငြိမ်း” ဟု တိုးတိတ်ညင်သာသည့်လေသံဖြင့်ကိုငြိမ်း၏ သနားဖွယ်ကောင်းသောမျက်ဝန်းအစုံကို မေဇင်ဆိုက်ကြည့်ကာ ကိုငြိမ်း၏လက်များကိုသူမလက်နုနုလေးများဖြစ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း နှစ်သိမ့်စကားပြောလို့ မေဇင် ကိုငြိမ်းကို အားပေးနေရှာတယ် …။
သူမမျက်ဝန်းများမှလဲ မျက်ရည်ပူများ ပါးပြင်ထက်သို့ စီးလို့ တယောက်ကိုတယောက်သနားခြင်းနာလည်မှုတို့နှင့်အတူနှစ်ယောက်သား မမြင်ရမကြားရတဲ့ အပေးအယူတွေ ချိန်ငြိနေသယောင်…..နေ့စဉ်တွေ့နေရသော မေဇင့် အဖြစ်လေးကို ကိုငြိမ်းဝင်းကောင်းကောင်းသိတလို…ကိုငြိမ်းဘယ်လိုတွေခံစားနေရလို့ ဘာတွေကိုတောင်းတနေသလဲဆိုတာကိုလဲ ကိုငြိမ်း၏ဘ၀အစအဆုံးကို သိသော မေဇင်ကလဲကောင်းကောင်းသိတယ်….ဒါကြောင့် အခုလို စိတ်ကွယ်ရာမှာ နားလဲမှုတွေ အပြန်အလှန်ပေးနေတဲ့ ဖိုမနှစ်ဦးတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးဘူတာဟာဘယ်မှာဆိုက်မလဲလို့ ထင်လဲ။ဒါကိုလဲသူတို့နှစ်ဦး သိပြီးသားပဲလေ…တွေးကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး…ဟုတ်တယ်မလား ။ ကိုငြိမ်းလဲ မေဇင်ကိုင်ထားသော သူ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကို လွှတ်ပြီး မေဇင့် လက်လေးများအပေါ်မှဖြည်းဖြည်းအုပ်ကိုင်လို့ မေဇင်မျက်နှာနားသို့ သူ့မျက်နှာကို တိုးကပ်သွားလိုက်ပြီး…အနည်ငယ်တုန်ရီနေသောလေသံဖြင့်ကိုငြိမ်းဝင်းကိုငြိမ်းရင်ထဲကစကားတခုလောက်ပြောပါရစေမေဇင် ကိုအောင်မင်းက မေဇင့်ကို ဂရုစိုက်ရဲ့လား..ဟင်…မေဇင်ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာ ကိုငြိမ်းကောင်းကောင်းသိပါတယ် မေဇင်ရယ်…သူမဖြည့်စီးနိုင်ရင်းကျွှန်တော် အဲဒီတာဝန်လေးကို ယူပါရစေ ..မေဇင်…နော်…ခွင့်ပြုပါဗျာ။ မေဇင် ခေါင်းလေးငုတ်သွားပြီး“ ဟုတ်ပါတယ် ကိုငြိမ်းရယ်….ကိုအောင်မင်းကလေ အခုဆိုရင် မေဇင့်ကို ရှိသေးတယ်လို့တောင်ထင်သေးရ့လဲားမသိဘူး…အချိန်ပြည့် ကုမ္မဏီကိစ္စဆိုပြီး ခရီးခဏခဏထွက်နေ တော့တာပဲ…သူအလုပ်ကြိုးစားလို့ ငွေတွေအများကြီးရတာကို မေဇင်မမှတ်မောဘူးဒါကိုလဲသူသိတယ်ဟင်း..ဟင့်..ရွတ်ဟင့်” ခံစားနေရသည်များကို ပြောရင်း မျက်ရည်များစီးကျလို့လာတော့တယ်..ပြောရင်နဲ့မျက်ရည်များစီးကျလာပါတော့တယ်။
မေဇင့်မျက်ရည်တွေကို ကိုငြိမ်းလက်များဖြင့် ပါးပေါ်မှ သုတ်ချပေးလိုက်ရင်း….မေဇင်ကလဲ အလိုက်သင့်လေးကိုငြိမ်းပုခုံးပေါ်ကို ခေါင်းလေးမှီထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုငြိမ်းပုခုံးပေါ်မေဇင် မှီလိုက်တော့ မေဇင့် ည၀တ်အင်္ကျီပါးပါး ရင်ဟိုက်လေးမှ မေဇင့်နို့လေးများကိုကိုငြိမ်းမြင်နေရသည်….မေဇင့် အသက်ရှူသံနှင့်အတူ နို့လေးများက ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ အရမ်းကိုချစ်စရာကောင်းပြီးကိုင်လို့ အရမ်းကောင်းမှာပဲလို့ ကိုငြိမ်းကြည့်ရင်းတွေးနေမိတာပေါ့။ကိုငြိမ်းကို့ကိုယ်ပြန်ထိန်းပြီး သူအခုတွေးနေ ဖီလင်ယူနေတဲ့ အရာတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်ပြစ်လိုက်ချင်ခ့တဲ ယ်….. မိန်းမ ဆိုတ့အဲ ရာနဲ့နှစ်န့ချဲီလို့ ကင်းကွာနေတဲ့ ကိုငြိမ်းတစ်ယောက်တော့ ဒီလိုလှပပြီးကာမပိုင်လင်ယောကျာ်းရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ပထမဘာလုပ်ရမှန်းမသိခင် သူလုံးဝ သိလိုက်တာ တခုကတော့ သူစပြီးစီးကျော်နေပြီဆိုတာကိုပေါ့….ပြည့်စုံခြင်းအထွတ်အထိပ်ကို မရမက။အမိအရ လှန်းယူလိုခြင်းဆန္ဒ အလွန်ပြင်းပျနေတဲ့အိမ်ထောင်တည်မိန်းမ မေဇင်အဖို့တော့ ဘာကိုမှ ဆင်ခြေ ထိန်းကွပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး…ဘယ်လောက်အားပြင်းတဲ့ အသိတရားပဲ ပြန်ဝင်လာပါစေ မေဇင်နောက်ဆုတ်တော့မှာ မဟုတ်ပါ….သူမ ထိုအရာကိုပြုလုပ်ဖို့ သေချာ စဉ်းစာပြီး ဖြစ်တော့ ရပ်တန့်ပြစ်ဖို့ ဆိုတာ မေဇင့် အတွက် ဒီအချိန်မျိုးမှာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အဓိပါယ်မဲ့စကားတခွန်းဖြစ်သွားမှာပါ…။သူမလက်လေးတွေကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ချင်းထိကပ်လို့ နွေးထွေးမှုတွေပေးနေတဲ့ ကိုငြိမ်းရဲ့အသက်ရှူသံ ရင်ခုန်သံတွေကနေ တဆင့် ကိုငြိမ်းစိတ်တွေအရမ်းလုပ်ရှားနေတယ် ဆိုတာကိုမေဇင်လဲသိနေတယ်…။ မေဇင့် သွေးခုန်နှုန်းတွေ ပိုမြန်လာလို့ အသက်ရှူသံတွေဟာလဲပိုကြမ်းတမ်းလာနေတာကို ကိုငြိမ်းထိတွေ့ ခံစားနေရင်းက …ခန္ဓာကိုယ်ပူးကပ်ထားလို့တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လောက်လိုအပ်နေကျတယ်ဆိုတာကို ပိုပိုပြီးသိရှိလာသလို ခံစားနေရတဲ့မေဇင်နဲ့ကိုငြိမ်း…။သူတို့နှစ်ဦးဖြစ်နေပုံက ဒိုင်နမိုက်တွေ အပြည့်ထည့်ထားတဲ့ ဂိုတောင်တစ်လုံး ဖောက်ခွဲဖြစ်ဖို့……တရှူးရှူးန့ေဲ လာင်ကျွမ်းရင်း ဂိုတောင်ရှိရာကို သွားနေတဲ့ စနစ်တံတချောင်းလိုပေါ့…သာမန်ုထက် ပိုလန်ွတဲ့ ရင်းနှီးမှုမျိုးကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ခံစားထိတွေ့မိနေကျတော့ မေဇင်အတွက်ရှေ့တလမ်းဆက်တိုးဖို့ သတ္တိတွေ ပိုရှိလာအောင် လုံ့ဆော်ပေးလိုက်တလိုဖြစ်သွားတော့တယ်…။
ဒီလိုနဲ့ မေဇင်တယောက် ကိုငြိမ်းရ့လဲ က်တွေကို ကိုင်ထားရာက ဖြုတ်ချလိုက်ပြီး ဖောင်းပြီးအပေါ်ကိုထောင်တက်နေသော ဘောင်ဘီဂွကြားရှိ ကိုငြိမ်း၏ လိင်တံကြီးကို အလိုလို အပေါ်မှအုပ်ကိုင်ပြီးသားဖြစ်နေတော့တယ်… ဘောင်းဘီအပေါ်မှ မမြင်ဖူးသေးသော ကိုငြိမ်း၏ သတ္တဝါလေးကို ဖြည်းဖြည်းညစ်လို့ဆုပ်ကိုင်ကြည့်မိတယ်….ကိုငြိမ်းလဲ အသက်ပြင်းပြင်းတချက်ကို ဆွဲလို့ရှူပြီး မေဇင့်ကို ဖက်ထားလိုက်ပါပြီ…“မေ …ကိုအောင်မင်းက တကယ်ကို မေ့အပေါ်နားမလည် ခဲ့ဘူးနော်” ကိုငြိမ်းတယောက် ကွဲအက်အက်အသံတိုးလေး ဖြင့် မနဲ့ အားယူရင်း မေဇင်ကို ပြောတော့။“ကျေးဇူးပြုပြီး ဘားမှမပြောပါန့ေဲ တာ့ ကိုငြိမ်းရယ်….ကိုအောင်မင်းက နားမလဲပေမဲ့…ကိုငြိမ်းကတော့ မေဘာတွေ ဖြစ်နေတာကို အစောကတ့ကဲ သိနေတယ် မဟုတလ်ား ဟင် ကိုငြိမ်း …ကိုငြိမ်းလဲ မေ့ စီကဘာတွေလိုချင်နေတယ်ဆိုတာကို မေအရင်ကတဲက သိပြီးသားပါ ကိုငြိမ်းရယ်…ကိုအောင်မင်းရှေ့မှသာမသင့်တော်လို့ မေ မျက်လုံးတွေကို ရှောင်ဖယ်နေပေမဲ့ ….ကိုအောင်မင်း မေ တို့ အနားမရှိတဲ့ အချိန် မေ ကကလေးပေ့လွို့ ချော့သိပ်နေတဲ့အချိန်တေဆွို မေ့ တကိုယ်လုံးကို ကို ခိုးကြည့်နေတာ သိပါတယ်နော်။ အလဲိုခိုးကြည့်ပြီး မပြည့်စုံခ့ရဲ တဲ့နေ့တေကွုန်သွားပါပြီ ကိုငြိမ်းရယ်…မေ့ ရင်ထဲကနေကိုလိုသမျှကိုကြိုက်တလို ယူလိုက်ပါတော့နော်…အရာအားလုံးကို ယူလိုက်ပါတော့..နော်..ကိုငြိမ်း…”ချွဲပျစ် ချိုမြိန်သော စကားများကို မေဇင်ခတ်တိုးတိုးလေး ပြောနေရင်း ကိုငြိမ်း၏ လိင်တံကြီးကိုလဲဖြည်းဖြည်းချင်း အပေါ်အောက်ပွတ်သပ်လို့ ပေးနေမိတယ်….မေဇင် ယခုလုပ်နေသော အပြုအမူများသည်ကိုငြိမ်းအဖို့ လေပေါ်မှာပျံဝဲနေရသလိုပါပဲ မ သတ္တဝါနှင့် အတော်ကြာကင်းကွာနေခဲ့သော ကိုငြိမ်းတယောက်အရမ်းကောင်းလို့ မိန်းပြီး ယူနေတော့တယ်…ပါစပ်မလဲ ညည်းညူသံ တဲတဲထွက်လို့်။ကိုငြိမ်းအဖို့ ဒီလိုခံစားမှုရသမျိုးကို တင်ထွေးငယ် မရှိတော့သည့် နောက်ပိုင် တခါကလေးတောင်မျှမခံစားခ့ရဲ တာကြာလို့နေပါပြီ…အခုတော့ကြည့်ပါ အုံး …သူ့မိန်းမ ထွေးငယ်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးကပြုစုလို့ ယုယပေးနေလိုက်တာ ပြောမပြတတ်အောင် ကောင်းလွန်းနေတာပေါ့။ မေဇင့် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက ကိုငြိမ်းလည်တိုင်တလျှောက်ကိုအနမ်းနုနုလေးတွေ ပးရင်းပေါ့….ကိုငြိမ်းရ့ေဲ သွးခုန်နှုန်တွေ ပိုပိုမြန်လာပြီးကိုခန္ဓာအတွင်းသွေးစီးစဉ်းမှုများလဲ အလွန်အရှိန်ပြင်းလို့လာတယ်။
ကိုငြိမ်းလည်တိုင်ကို မေဇင့်နှုတ်ခမ်းလေး များ လျှာဖြားလေးများဖြင့် ဖွဖွလေးနမ်းလိုက် ယှက်လိုက်လုပ်နေမိရင်း… ကိုငြိမ်းလည်ပင်းရှိသွေးလွှတ်ကြေားဖောင်းဖောင်းလေးတချောင်းအတွင်း အရှိန်ဖြင့် ဖြတ်တန်းသွားသည့် သွေးစီးစဉ်းမှုကိုမေဇင့် လျှာဖြားလေးမှ ထိတွေ့ခံစာလိုက်ရသည်….မုတ်ဆိတ်ကျင်ဆွယ်တွေ မကြာသေးမီကမှ ရိတ်ထားသော မေးရိုးတလျှောက်နဲ့ မေးစေ့ တွေမှာ မေဇင်ရဲ့တတွေး တေနွဲ့ ဖြန်းပတ်ထားသလိုပါပဲမေဇင့်ပေါင်ကြားအတွင်မှာလဲပူနွေးလို့လာပြီး စိုစိုစွတ်စွတ်လေးဖြစ်လို့ လာပါပြီး။ ကိုငြိမ်းတယောက် မေဇင့် အပြုအမူတွေကို သည်းမခံနိုင်တော့ပဲ မေဇင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကို ဆွဲယူကာအားရပါးရကို အနမ်းမိုးတွေရွာပေးပါတော့တယ်။ အဲလို ကိုငြိမ်းကစလို့ မေဇင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို တေ့ပြီး ကစ်ဆင် ဆွဲလိုက်ခြင်းဟာ ….သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကို ဗို့အားအလွန်ပြင်းတဲ့ ဓာတ်အလိုက်ခံလိုက်ရသလိုပါပဲ…နှာသံတွေ အသက်ရှူသံတွေကလဲ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဧည့်ခမ်းအကျယ်ကြီးထဲမှာတိုးတိုးညင်သာစွာ ထွက်လို့နေပရောလား…။ရုတ်တရက် ကိုငြိမ်း မေဇင့် ဂျိုင်းအောက်ကနေ မပြီး မတ်တက်ထရပ်လိုက်တယ်…မေဇင်ကဒီအပြုအမူကြောင့် ကိုငြိမ်းကို အံ့သြသလိုကြည့်နေမိတာပေါ့။
အတန်ကြာသေဆုံးခဲ့ရသော ရမ္မျမီးကြီးဟာအခုတော့ ကိုငြိမ်းစိတ်အတွင်းဝဲ တဟုန်းဟုန်းဖြင့် သောက်လောင်နေတော့တယ်။ ဒီလို ရမ္မက်ငွေ့တွေရိုက်ခံထိသွားသော ကိုငြိမ်း၏အပြုအမူများ ပိုရ်ျရဲတင်းလို့လာပါတယ်။မပြောမဆိုနှင့် မေဇင့် ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုငြိမ်းဆုပ်ကိုင်ပြီး အုပ်နံရံဖက်ကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပါရော…အုပ်နံရံမှ ကပ်လို့ ကြောင်ပြီးကြည့်နေတဲ့မေဇင့်အနားကို မျက်တောင့်နီ လူမိုက်အထာဖြင့် တလမ်းချင်းရှောက်သွားပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို အုပ်နံရံမှာမြှောက်လို့ဆွဲကပ်ထားလိုက်တာပေါ့်မေဇင့်နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ကိုငြိမ်းနှုတ်ခမ်းဖြစ်တေ့ကာအနမ်းတချက်ပေးလိုက်တယ်…ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်သော ကိုငြိမ်းအနမ်းကြောင့် မေဇင်ရင်ထဲမှာကြည်နူးမိနေယုံရှိသေး။ကို ငြိမ်း တယောက် သူ့လျှာကို စေ့နေတဲ့ မေဇင့်ပါစပ်ပေါက်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး…တံတွေး နှင့် နှုတ်ခမ်းလျှာတို့ရဲ့ကြမ်းတမ်းစွာ ရောနောလုပ်ရှား ပွတ်သပ်နေရာမှ အသံများထွက်သည့်တိုင်ကစ်စင်ဆွဲပြစ်လိုက်ပါရော… ။ တယောက်လျှာ တယောက်ကလိလိုက် နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေကိုသွားလေးတွေန့ဖဲ ဖွေ လး ဆကွဲိုက်လိုက်နဲ့ နမ်းမိနေလို့ပေါ့…။ညည်းသံတဲတဲလေးထွက်ကျလာတယ်ကိုငြိမ်းကိုတင်ကျပ်စွာ မေဇင်ဖက်ထားရင်း ဘော်လီမပါတဲ့ည၀တ်အိင်္ကျီအောက်ကသူမနို့တွေအပေါ်တအားဆွဲဖိထားလိုက်မိတယ်တရိတ်ရိတ်တက်လာတဲခံစားမှုဖီလင်တွေကြောင့် မေဇင့် နို့တီးခေါင်းလေးများမာတောင်လာပြီး ကိုငြိမ်းရင်ဘတ်ကိုသွားထောက်လို့နေပါရော နိ့သီးခေါင်းအရသာကြောင့် ကိုငြိမ်းမေဇင့်ကို အနမ်းမိုးရွာတာရပ်ပြီး..မေဇင့်အပေါ်အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးပြီး တလုံးဖြုတ်နေလေရဲ့. ပြူထွက်လာတဲ့ မေဇင့်နို့အုံကိုကြည့်လို့ မေဇင့်မျက်နှာကိုလဲတချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရာကိုကြိုက်သလိုလုပ်နိုင်ပါတယ်နော် လို့အထာပေးတဲ့ အပြုံးကောက်လေး တခုကိုမေဇင့်မျက်နှာကနေထွက်ကျလာတာပေါ့…။
ကိုငြိမ်းရ့လဲ က်တဖက်က မေဇင့် နို့တလုံးပေါ်အုပ်ကိုင်လို့ ခက်ဖွဖွညစ်ပေးရင်း ကျန်တလုံးကိုတော့ပါစပ်နဲ့ကုန်းစုပ်လိုက်တယ်…“အင်း…အင်.အား.ကို……အင်း…အ..အင်” ဆိုတဲ့ ညည်းသံလေးတွေထွက်လို့လာယောမေဇင့်ပေါင်တွေ တဖြည်းဖြည်းကားသွားပြီး ကိုငြိမ်းရဲ့ လွတ်နေတဲ့ လက်တဖက်ကိုလှန်းယူကာသူမပေါင်ကြားအတွင်း ဖိကပ်ပေးထားလိုက်ပါရော….ကိုငြိမ်းလက်က မေဇင့် ည၀တ်ဘောင်းဘီလေးကိုဆခွျွဲတ်ပြစ်ပြီး အမွေး အုပ်အုပ်နဲ့အရည်တွေစိုလို့နေတဲ့ မေဇင့် အဖုတ်လေးကိုအုပ်ကိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းပွတ်ပေးနေတယ်…။ အင်း …အား….ကို…ကိုလို့….ကောင်းတယ်…..အင်း…အင်” မေဇင်ပါစပ် ဟဟလေးအတွင်းမှညည်းသံတွေအဆက်မပြတ်ထွက်လာရင်း…ကိုငြိမ်းကလဲ ပွတ်ပေးနေတာကို အရှိန်တင်လို့ အမြန်ပွတ်လိုက်နို့စို့လိုက် နဲ့မေဇင့် ညည်းသံတွေအသက်ရှူသံတွေကလဲ တခန်းလုံးကိုပြည့်လို့….မေဇင်ကလဲကိုငြိမ်းလက်နဲ့ပတ်ွပေးနေတဲ့စည်းချက်အတိုင်သူမအဖုတ်လေးကို ကော့ကော့ပေးရင်အားကြိုးမှန်တက်ပါပဲ..။”အား….အင်…အား…အားးးးးးးးးးး……” ဆိုပြီး အရုပ်ကြိုးပြတ် မေဇင်တခါပြီးသွားတာပေါ့။ ကိုငြိမ်းလက်တခုလုံး မေဇင့်အဖုတ်ရည်တွေနဲ့ ရွဲလို့မေဇင် ပါစပ်မှ အက်သံလေးဖြင့်“ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုရယ်…မေလေး လန်ွခ့တဲ့၂နှစ် ၃နှစ်အတွင်း ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ အရသာမျိုးမေဇင်မရခ့တဲာကြာပြီ…သိလာ…ကိုရယ်…ကို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်ကွာ….ဒီနေ့တနေ့လုံး မေဇင့်အနားမှာ ကိုငြိမ်းနေပေးနိုင်မလား…ဟင်း..ကိုငြိမ်း…ကိုအောင်မင်းက မနက်ဖြန်မှမန္တလေးက ပြန်ရောက်မှာ ဒီနေ့တနေ့လုံးရော တညလုံးပါ မေဇင်ကိုငြိမ်းကို ချစ်ပါရစေ..ကွာ”။ မေဇင့် အဖုတ်ကိုကိုင်ထားသော လက်ကို ကိုငြိမ်းပြန်ဆွဲ ယူလိုက်ပြီး …လက်တွင်ပေနေသော သုတ်ရည်နှင့်ချော်ဆီများရောနောနေသော မေဇင့်၏ အဖုတ်ရည်များကို လျှာနှင့်ယက်ရင်းက“အင်..ကိုဒီနေ့ မေဇင့်အိမ်မှာ အချိန်ကုန်ဖို့တော့ စိတ်မကူးထားဘူး…ဒါပေမဲ့ ကို မေဇင့်ကိုမငြင်းတော့ပါဘူး…ကိုလဲ မေ့ကိုချစ်လို့မဝသေးဘူး…ဟဲဟဲ” လက်ချောင်များရှိ မေဇင်၏ သုတ်ရည်များကို ယက်နေရင်းစကားပြောနေသော ကိုငြိမ်း အမူအရာကို မေဇင် ကြည့်ရင်မှ ရင်ထဲတွင် တဏှာ မီးများပြန်လဲလောက်ကျွမ်းလို့ လာပါတယ်။ မေဇင့်အဖို့ တခါပြီးသွားတာတောင် ၁မိနစ် မပြည့် သေးဘူးထပ်ပြီးတောင်းနေတော့ တော်တော် နှာကြီးတဲ့မိန်းမလို့ ကိုငြိမ်းယူဆမိရင်ယူဆမိပါမယ်ဒါမေမဲ့ သူမ ရဲ့နှစ်န့ချဲည်လို့ ကြာအောင် ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘားမှပြောစရာမရှိပါဘူးတာဘယ်သူ့အပြစ်လဲ …လင်တော်မောင်များရဲ့ အပြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလာ….ဒါန့ကဲိုငြိမ်းလက်များကို လျှာဖြင့်ယက်နေရင်း မေဇင့် မျက်နှာကို တည်ကြည်သောမျက်လုံးများဖြင့် တည့်တည့်ကြည့်ရင်း…။ ကို တခုပြောချင်တယ် မေ…ဒီလိုပဲ ကိုအောင်မင်းက ဆက်ပြီးမေ့ကိုနားမလဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင် ကိုမေ့နားမှာအချိန်ပြည့် တာဝန်ယူပေးချင်တယ်ကွာ…နော်” ” ဒီလောက်ချောပြီး အရသာရှိတဲ့မိန်းမကို သူမို့လို့ဂရုမစိုက်တယ်…”ကိုငြိမ်း မြေခွေးအပြုံးတချက်ပြုံးရင်း မေဇင့်အား ပြောရာ…“အို..ကိုငြိမ်းရယ် အဲဒီလူကြီးမေဇင်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ဒီတသက်သိနိုင်တော့မယ်မထင်ဘူးခစ်..ခစ်..”ကိလေသ မာယာဖြင့် ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းပြီး လမ်းဘေး အပြတ်မယ်တို့၏ကျေနပ်အားရသော အပြုံးတပွင့်ကိုပြုံးရင်..မေဇင်တယောက် သူကိုသူသဘောကျလို့တခစ်ခစ်နဲ့ရီနေတော့တယ်။
ရီနေရင်းက“သူမေဇင့် ကို ကိုငြိမ်းအခုလို ဖြည့်ဆည်းပေးပုံမျိုးနဲ့ မေဇင်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်မှမေဇင့် အချစ်တွေသူ့အတွက်မရှိနိုင်တော့ ပါဘူး ကိုရယ်…မေဇင် ကို့ကိုအရမ်းချစ်နေမိပြီ..သိလား ကို”မေဇင် ၏ ချွဲပြစ်သော စကားများကို ကိုငြိမ်းနားထောင်နေရင်မှ မေဇင့်အဖုတ်အတွင်သို့ ပြန်နိုက်ကာ …အုံထနေသော အဖုတ်မွေးအုံအုံလေး အားဆွဲဆောင့်လိုက်သည်…။”အ….ကို ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ နာလိုက်တာကွာ….” ဟုမေဇင်ပြောနေရင်းက“မေ ပဲပြီးသေးတာ ကိုငြိမ်းကပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူး …ကို မေ့ ကိုလုပ်ချင်တယ်ကွာ”မေဇင်တစ်ယောက် ကိုငြိမ်းစကားမဆုံးသေး ကိုငြိမ်းအုပ်မိုးထားသော ရင်ခွင်ထဲမှ ပြေးထွက်လိုက်ရင်ဆိုဖာရှိရာ သို့ တလှမ်းချင်းရှောက်သွားရာ…မေဇင့် လမ်းလျှောက်ပုံကို ကိုငြိမ်းချေဆုံးခေါင်းဆုံးမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မတက် လိုက့်ကြည့်နေလေရဲ့။ ခြေလှမ်းများကို တလမ်းချင်းလျှောက်လို့ဆိုဖာရှိရာသို့ သွားနေသော မေဇင့်လမ်းလျှောက်ပုံမှာ ကိုငြိမ်းအဖို့သွးပျက်မတတ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့် ကိုငြိမ်းရင်ဘတ်ကြီးများမှာ တဒုတ်ဒုတ် တဒုတ်ဒုတ်နှင့်….ရမ္မက်မီဖြင့် အပူပေးထားသော ကာမသွးများကလဲ ဆူပွတ်လို့နေတာပေါ့…ကိုငြိမ်းလဲ မျက်တောင်မခက်ပဲမေဇင့်နောက်ကျောအလှကို ငေးမောမှင်သက်မိနေရင်း မေဇင်မှာ အနည်းငယ်ဝသယောင်ရှိပေမဲ့…သာမန်ယောကျာ်းသား တယောက်အဖို့ အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုလုံးအချိုးအစား ရှိသူလေးပါ…။ ဆိုဖာနားကိုရောက်သွားတော့ မေဇင်တယောက် ခါပေါ်ရှိ ည၀တ်ဘောင်းဘီ မျော့ကြိုးလေးအတွင်းသို့လက်ချောင်းလေးများထိုးချိတ်ကာ ဘောင်းဘီလေးကို တဖြည်းဖြည်းအောက်သို့ဆွဲ ချွတ်လိုက်တော့တယ်…ဖြူဖွေးနုအိနေသော ဖင်လုံးလုံးလေးသည် ကိုငြိမ်းမျက်လုံးတွေကို ပြာဝေသွားအောင် လုပ်လိုက်သလို…ဘောင်းဘီးအား ချွတ်ပြီး ဆိုဖာရှိရာကိုလက်ထောက်လိုက်ကာ ဖင်ကြီးအား ကိုငြိမ်းဘက်သို့ လဲ့ပေးပြီးကုန်းပေးထားတာကြောင့် ဖင်နှလုံးကြားမှ ဖုတ်မွေးများနှင့် ရောနေသော အဖုတ်ဖြူဖြူအတွင်းမှအနီရောင်အတွင်း နှုတ်ခမ်းသားများ ပွင့်အာရ်ျလားတော့တယ်။ကိုငြိမ်းလဲ မေဇင့် ဖင်ဖြူဖြူအနောက်သို့ ကပ်သွားပြီး ဘောင်းဘီအတွင်းမှ ထိုးထောင်ထွက်နေသည့် …သူ၏လီးကြီးဖြင့် သွားထောက်ကာ စရ်ျ ညောင့်ပေးနေ၏ ။ လက်များကလဲ မေဇင့်အိင်္ကျီအောက်သို့လျှိုလို့နို့သီးလုံးများအား အစုံလိုက်ဆွဲညစ်ကာ အနောက်မှတေ့ရင်း ပုံမှန်လေး ညောင့်ညောင့်လို့နေတော့ …မေဇင်ကလဲ သူ့ဖင်ကို ကိုငြိမ်းရဲ့ ညောင့်ချက်တွေ အတိုင်း ကော့ကော့လိုပေးနေလေရဲ့…အဲလို တယောက်ကိုတယောက် ကော့ရင်း ညောင့်ရင်းဖြင့် မေဇင် ကိုငြိမ်းဘက်သို့လဲ့ကာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်တော့တယ်…။
မျက်နှာရှေ့တည့်တည့်တွင် ထိုးထွက်နေသော ကိုငြိမ်းလီးကြီးကို လက်ကလေးနဲ့တချိန်ထြဲပန်ပတ်ွပေးနေလေရ့…ဲ ပတ်ွပေးရင်းက ကိုငြိမ်းဘောင်းဘီ ဇစ်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ရာသွေးကြောအမင်များဖြစ် အဖုဖု အထစ်ထစ် ညီညာပြန့်ပြူချင်းမရှိသော ကိုငြိမ်းလီးကြီးသည် မေဇင့်မျက်နှာရှေ့တွင် တရမ်းရမ်းဖြစ်မှာန်ဖီနေတော့တယ်…မေဇင့် ပါစပ်အနည်းငယ်ဟသွားပြီးကိုငြိမ်းမျက်နှာလေးကို အံ့သြသော အမူအရာဖြင့်မော့ကြည့်ကာ။ ကိုရယ်…ကို့ပစ္စည်းကြီးက ကြီးလိုက်တာ ကိုအောင်မင်းပစ္စည်းနဲ့များ ရေနဲ့ဆီလိုကို ကွာတာပဲ…”ကိုငြိမ်းမေဇင့်ကို အပေါ်မှပြန်ပြုံးပြသည်…ကိုငြိမ်းကို ပါစပ်အဟောင်းသားလေးနဲ့ ကြည့်ပြီးပြောနေသော မေဇင့် ပါစပ်ဟဟလေးသည် …ကိုငြိမ်းရ့လဲီးထိပ်ကိုအနမ်းလေးတချက်ပေးလိုက်စဉ်…“အို…မေရယ် အဲလိုလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးကွာ…ထပါနော်..”မေဇင်ကကိုငြိမ်းကိုပြန်မော့ကြည့်ရ်ျ“ကို…မေဇင့်ကိုချစ်ရင်…အလဲိုစကားမပြောန့ကွဲာ…”ဟုကိုငြိမ်းကို ပြန်ပြောရင် လီးကြီအားပါစပ်ပေါက်ကျင်းကျင်းကလေးထဲသို့ အတင်းထိုးထည့်ကာ ကိုငြိမ်းကို ပလွေပါတော့တယ်….။
ကိုအောင်လဲမေဇင့်ဆုပ်ချက်တွေအောက်မှာမျက်ဖြူလေးဆိုက်ရင်းအား…အား…မေ…အားး….ရှီးး…အား..ရှီး..ကောင်း…လိုက်…တာမေရယ်…အား”ကိုငြိမ်းကောင်းကင်ဘုံရောက်နေသလားမှတ်တယ်.မေဇင်ကလဲ အောက်ကနေ တ.ပလတ်ွပလတ်ွပလပ်..ပလပ်နဲ့ ကြေးစား ဖာသည်လားအောင့်မေ့ရ အောင်ပလွေအတော်ထူးချွန်တဲ့သူပဲမေဇင်တယောက် မှုတ်ရင်းဆုပ်ရင်းကနေ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်တော့ ကိုငြိမ်းအရမ်းကို ဖီလင်တွေယူရင်းမေဇင်ကို ကြည့်နေတယ်…မေဇင်လဲကိုငြိမ်းကိုဖာပြုံးလေးတချက်ပြန်ပြုံးပြရင်းနှစ်ယောက်သား အရမ်းကိုကောင်းလို့ ကမ္ဘာကြီးကိုမေ့နေကျတာပေါ့…ကိုငြိမ်းအတွေးထဲမှာတော့။ မေဇင်တယောက်ဒီလောက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုများသင်ယူ ထားသလဲပေါ့ကိုအောင်မင်းနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်။တကယ်တော့ မေဇင် ယခုလို ပြုစုကျွမ်းကျင်နေခြင်းမှာ အိမ်မှာကိုအောင်မင်း ပန်းဆိုးတန်းက ၀ယ်ဝယ်ပြီးကြည့်ကြည့်နေကျ အပြာဇာတ်လမ်းများရဲ့ကျေးဇူးတွေလို့ ပြောရမယ်…“ အ..မေ…အား…မေဇင်…ကိုအရမ်းပြီးချင်နေပြီး…အ…အားးးးးးးးးးး” အနှစ်နှစ် အလလ စုထားသောကိုငြိမ်းရဲ့သုတ်တွေ မေဇင့် ပါစပ်ထကဲို ရေပိုက်ခေါင်းဖွင့်ချလိုက် သလို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ပန်းထွက်ကုန်ပါရောလား…။သုတ်ရည်တေနွှင့် ပြည့်နေတဲ့ မေဇင့်ပါစပ်ကြီး ဖောင်းကားလို့နေတော့တယ်…ကိုငြိမ်းလဲမေဇင့်ခေါင်းလေးကိုပွတ်လို့…“အွတ်..အင်းးးး.” ပါစပ်ထဲက သုတ်ရည်အားလုံး မေဇင်တယောက်မျိုချလိုက်ပါပြီ…ကိုငြိမ်းမေဇင်ကို အံ့သြ နေတော့တာပေါ့….
“မေ..ဘာလို့ မျိုချလိုက်တာလဲ မရန်ွမရှာနဲ့ ကွာ”မေဇင် ကိုငြိမ်းကိုဘာမှပြန်ပြောနေတော့ဘူး သူ့လုပ်ရက်ကို အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်လို့ ပြုံးနေလေရဲ့…ကိုငြိမ်းမေဇင့်ခေါင်းကို အသာအယာလေးပွတ်ရင်း။ ဒီမနက်ကတော့ ဖြတ်တန်းခဲ့ဖူးတဲ့မနက်ခင်းတွေထဲမှာ ကျက်သရေအရှိဆုံးနဲ့ အရသာအရှိဆုံးမနက်လေးပဲမေ..” ဟု နှုတ်မှ ရေရွတ်ရင် မေဇင့် အပြုအစုပေါ် ကိုငြိမ်းတယောက်အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်လို့နေတာပေါ့..ဒူထောက်ထားသော မေဇင်တစ်ယောက် ပြန်ထရပ်ပြီး ကိုငြိမ်းကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ကာ“ဒါပေမဲ့ မေ့အတက်ွတော့ မဟုတ်သေးဘူး” လို့ပြောရင်း ကိုငြိမ်းအိင်္ကျီ ကြယ်သီးတွေကို တလုံးချင်းစဖြုတ်နေလေရဲ့။ကြယသ်ီးများဖြုတ်ပြီးသော ရှပ်အိကျီင်္ကို ချွတ်ရ်ျ စားပွဲပေါ်သို့ပြစ်တင်လိုက်ပြီး …ဒူဆစ်အထိကျွတ်ကျနေသော စတိုင်ပန်ကို ချေထောက်ဖြင့်ထိုးချွတ်ကာ ဘေးတနေရာသို့ ကန်ထုတ်လိုက်သည်။ ကိုငြိမ်လဲ မေဇင့်ကိုပြုံးကြည့်ရင်း“ဒီကောင်မလေးတော်တော် စိုး” လို့ပြောပြီး မေဇင့် ပါးလေးကို တချက်နမ်းလိုက်ပါတယ်အိကျီင်္ဗ လာဖြစ်နေသော ကိုငြိမ်း၏ ရင်အုပ်များ ဗိုက်သားရှိ အရစ်လိုက်အရစ်လိုက်ဖြစ် မာတောင်ကျစ်လစ်ပြီး ယောကျာ်းပြီသသော ဘဲလ်လီသားများကို ကြည့်ကာ မေဇင်တယောက် သဘောခွေ့ နေလေရဲ။ထိုက့သဲို ဘလ်ဲလီသားများ ရင်အုပ်ကားကားများအရင်ကမရှိ ကိုငြိမ်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရင်ကဆိုခွေးပြစ်တ့တဲုတ်သာသာရယ်…။ နောက်ပိုင်အရက်ဖြတ်ပြီးတော့ ဂျင်မှာ အသဲအတန် တစ်နှစ်လောက်ကစားထားသဖြင့် အချိုးအစား အလွန်ကျနနေသည့် ဘော်ဒီ အလှကြီးကို မေဇင် သဘောကျလို့နေနိုင်တာပါ။ မေဇင်လဲ သူမအိကျီင်္များကို စချွတ်နေရင်း…အတွေးတခုဝင်လာတယ်။“အော်…ငါချွတ်လိုက်လို့ တုံးလုံးကြီးဖြစ်သွားရင် ကိုငြိမ်းရှေ့ ရှက်စရာကြီး “ ဟု ရမ္မက်ကြားကအရှက်တရားတွေ ရနေဆိုပဲ။ အိကျီင်္လေးကို ချွတ်လို့ စားပွဲပေါ်သို့ ပြစ်တင်လိုက်တယ်။မေဇင် အနည်းငယ် စဉ်းစားရ်ျ စိတ်ထင့်နေသည်ကို ကိုငြိမ်းသတိထားမိလိုက်တော့ …မေဇင့် အနောက်သို့သွားပြီး မေဇင့်၏ပုခုံးများပေါ်သို့ လက်ကိုတင်ချိတ်ထားလိုက်တယ်။ မေဇင်လဲ သူ့လက်များဖြင့် ကိုငြိမ်း၏ခေါင်းကို လက်ပြန်လှန်းကိုင်ကာ အလွန်ဆွဲဆောင်အားကောင်းသော ပိုစက်ရှင် တခုကို အတူတူ ပိုစ့်ပေးလျက်သားဖြစ်နေကျတာပေါ့။
ကိုငြိမ်းလက်များမေဇင့်ပုခုံးပေါ်မှဖြည်းဖြည်းစင်းသွားပြီးနို့လုံးများနှားအရောက်တွင်တော့….လက်ချောင်လက်ထိပ်လေးများဖြင့်မေဇင့်နို့အုံ ဘေးခြမ်းများအား ဖွဖွကုတ်လို့ ပွတ်ဆွဲပေနေလေရဲ့…။ ဆက်ပြီး လက်များကိုဖြည်းဖြည်းလျှော့ချကာ မေဇင့် ခါးရှိ ည၀တ်ဘောင်းဘီ မျှော့ကြိုးများအတွင်းလက်နိုက်ကာ မေဇင့် ည၀တ်လေးကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်တယ်။ ကိုငြိမ်းလက်များ မေဇင့် ည၀တ်လေးကို အပေါ်မှ ညင်သာစွာ ဆွဲချနေရင်း…. သူ၏နှုတ်ခမ်းများဖြင့် မေဇင့်လည်တိုင်လေးမှစလို့ ကျောပျင် တင်ပစုံးအထိတိုင်အောင် ဖွဖွလေး နမ်းကာဆင်းသွားပြီးဘောင်းဘီလေးကိုလဲ အောက်သို့ အဆုံးဆွချဲကာ ချွတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး သူနမ်းခဲ့တ့လမ်းကြောင်းအတိုင် နမ်းရင်းပြန်တက်သွာပြန်တယ်။ကိုငြိမ်း၏ ပူနွေးသောတံတွေးရည်များအရသာကို မေဇင်ခံစားရင်း…. အိမ်နံရံအားလက်ဖြင့်ထောက်ကာကိုငြိမ်း၏နှုတ်ခမ်းများ ကျောပြင်အတွင်းသို့ ဆူးဝင်သွားမတတ် ခက်ကြမ်းကြမ်းနမ်းစေလိုသည်ကိုအချက်ပြသောအနေဖြင့် ကိုငြိမ်း၏နှုတ်ခမ်းများကို သူမကျောပြင်နှင့်ပြန်ရ်ျတွန်းတွန်းပေးလို့နေတယ်။တဆက်တည်း မေဇင့်လက်များက သူမနို့နှစ်လုံးကို အုပ်ကိုင်ထားသော ကိုငြိမ်းလက်ပေါ်သို့ထပ်ရ်ျအုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး… သူမနို့ကိုသူမ အားရစွာ ညစ်ချေနေလေရဲ့…။ မေဇင့် ကျောပြင်ကို ကိုငြိမ်း ပုဇွန်တုတ်ကွေး ပုံအနေအထားမျိုးဖြစ်နောက်မှသိုင်းဖက်ထားပြီး….သူ့လိင်တံတဆာကြီးကိုလဲ မေဇင့် ဖင်နှလုံးကြားသို့ ထိုးထည့်ကာ ညောင့်ညောင့်လို့ ပေနေပါတော့တယ်။ကိုငြိမ်း တစ်ယောက် မေဇင့် စအိုနဲ့အဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတလျှောက် ပွတ်ဆွဲ ဆွဲရင်ကကိုငြိမ်းလိင်တံကြီးမှာ ပိုပိုပြီးတောင့်တင်းလာသည်ကို မေဇင့်သတိထားမိနေတယ်။
သူမလဲ အလိုက်သင့်ဖင်လုံးလုံးလေးကိုကိုငြိမ်းညောင့်နေသောစီးချက်အတိုင်ကာ့ကော့ပေးရင်းမျက်လုံးများကလဲမေးစင်းလို့ပေါ့။မေဇင့် တွင်းဝမှထွက်ယိုကျလာသော ချောဆီများ ဖြင့် ကိုငြိမ်းလီးကြီးမှာစိုရွှဲလို့နေတာပေါ့…ဒါနဲ့ လီးထိပ် ဒစ်လုံးကို အဖုတ်အကွေဲ ကြာင်းတိုင်း ဖြည်းဖြည်း စရ်ျ ကိုငြိမ်းချော့တွင်းနေစဉ်…“ကို…အ..ဖြည်းဖြည်းထ့ေဲ နာ် …ကို့ ပစ္စည်းကြီးက မေ အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ …ကိုအောင်မြင့် ပစ္စည်းထက် ၅စ ၆ စ လောက်ပိုကြီးတယ်…ခစ်..ခစ်…မေဇင် လဲမလုပ်ရတာကြာပြီဆိုတော့လေ…ဖြည်းဖြည်းတွင်းနော် ကို“ဟုဆို ကာ ကိုငြိမ်းအားသမင်လည်ပြန်ကြည့်ရင်းက ပြုံးပြီးပြောလိုက်သည်။ကိုငြိမ်း အသာအယာ ချော့လို့ တွင်းနေရာမှ ဖက်ကိုင်ထားသော သူ့လက်လေးများကို မေဇင့်နို့လုံးလေးများမှလွှတ်ကာ နောက်အနည်းငယ်ဆုပ်ပြီး မေဇင့်နောက်ပိုင်အလှကို အကဲခက်နေလေရဲ့…“အင်…ဟုတ်ပြီ ဝိတ်လဲတော်တော်ကျ သွားပြီ…ဖင်လုံးလေးတွေကလဲ လခြမ်းလေးတွေကျနေတာလှလိုက်တာ မေ ရယ်လို့ ကိုငြိမ်း စိတ်ထဲပြောနေမိသည်။ ကော့ထားတဲ့ မေဇင့် ဖင်နှစ်လုံးကြားမှ အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖြူဖြူလေးများအတွင်းတွင် နီရဲရဲအတွင်းသားလေးများ ပြူထွက်နေသည်…ကိုငြိမ်းစိတ်တွေ လုံးဝထိန်းလို့မရတော့တဲ့ အဆုံးလီးကြီးအားလက်ဖြင့် ကိုင်ကာ မေဇင့် အဖုတ်ဝသို့ တေ့ပြီး ဖြည်းဖြည်းထပ်သွင်းပြန်ရာမေဇင်လဲအလိုက်သင့်ပင် သူမဖင်ကို နောက်သို့ အနည်းငယ် ပြန်တွန်းပေး လိုက်၏ယောကျာ်းရှ်ိသော်လည် လိင်တံသေးငယ်တဲ့ယောကျာ်းကြောင့်လား …လိင်ဆက်ဆံမှု သိပ်မရှိလို့လားမသိမေဇင့် အဖုတ်ဝသည် ကိုငြိမ်း၏ဒစ်ထိပ်လေးပင် ရှိသေးသည် အနည်းငယ်ကျပ်နေသဖြင့် ရှေ့ဆက်တွင်းရန်နဲနဲခက်လို့နေသည်….။
ကိုငြိမ်းဒစ်ကိုပြန်ထုတ်ပြီး ထပ်တခါ ပြန်သွင်းကြည့်တယ်..သွင်းလိုက်တိုင်း မေဇင့် ပါစပ်မှ တ ..အင်း..အင်းနဲ့နာကျင်လို့ အသံများထွက်ထွက်လာတယ်။.နောက်ဆုံး ကိုငြိမ်းတယောက်မေဇင့် နာကျင်မှုကိုမထောက်တော့ပဲတဆုံးစောင့်သွင်းလိုက်ရာ…“အား….ကို”ဟူသော မေဇင်၏ အော်သံသည် အိမ်ရှေ့လူသွားလမ်းကပင်ကြားနိုင်လောက်အောင်ပေါ်ထွက်လာတော့တယ်….ကိုငြိမ်းလီးကို ရှေ့တိုးနောက်ငင် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးနေတော့ပြီး….ကိုငြိမ်းရဲ့ လိင်တံကြီးကတော့ဖြင့် မေဇင့်အဖုတ်နုင့် တိုင်းလုပ်ထားသလားအောင့်မေ့ရအောင် အဖုတ်နဲ့ တုတ်နဲ့ က အလွန့်ကိုလိုက်ဖက်ညီတယ်…ပြောရရင် ကွန်ဒုံးထဲ ဘယ်လိင်တံ စွပ်စွပ်ချောင်မနေပဲ ကျပ်ကျပ်လေး ကွက်တိဖြစ်နေသလိုပေါ့….။ မေဇင်တယောက် ဖင်ကိုကော့ကော့ပေးရင်း ကိုငြိမ်းလိင်တံကြီး အဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့အရသာကို မျက်လုံးလေး မိတ် ပါစပ်လေး ဟလို့ မိန့်မိန့်ကြီးခံစားနေပါရောလား….ဘယ်တုန်ကမှ မတွေ့ဖူးတဲ့လိုးစောင့်ချက်တွေ က မေဇင့်အဖို့ ကောင်းကင်ဘုံပဲရောက်နေလာ…ကမ္ဘာပဲပျက်နေလားမသိ…ဧည့်ခမ်းတခုလုံးတော့ မေဇင့်ညည်းညူသံ အင်း….အင်း.ရှီး.အင်း….ကို.ချစ်တယ်….အင်း…အား…ကိုရယ်..ကောင်းတယ်….အင်း….အသံများနှင့်…” ဗလွတ် …ဗလွတ်..ပြွတ်ပြွတ်…”ဖြင့် အရည်များရွမ်းနေသော မေဇင့်အဖုတ်အပေါက်ဝလေးကို ကိုငြိမ်း ငပြဲ့ကီး ၀င်တိုင်း ထွတ်တိုင်း ထွတ်ထွတ်လာတဲ့ ကာမဆက်ရက်သံများဟာတအိမ်လုံး ညံစီလို့ကိုငြိမ်းပထမ မေဇင့်ကို ပုံမှန် အထုတ်အသွင်းလုပ်ရာမှ တဖြည်းဖြည်းအစွမ်းကုန်ကိုအားရပါးရဆောင့်လိုးတော့တယ်.မေဇင်လဲ လွှတ်လပ်စွာပဲ အော်ညည်းလိုက်တိုးတိုးလေး ညည်းလိုက်ဖြင့်နှစ်ယောက်သားပြည့်ဆုံးခြင်းရှိ ရာ ကာမပန်းတိုင်တို့တက်ညီလက်ညီချီတက်လို့ပေါ့…။
ဒီအချိန်ကိုအောင်မင်းများပြန်လာလို့ကတော့မတွေးရဲစရာ။“အားးအ.အားးးးး.” ဟူသောသံဆွဲလေးဖြင့်မေဇင့် အခေါင်းထဲတွင်မေဇင် ရေကန်ဖောက်ချလိုက်လေပြီး…ကိုငြိမ်းတော့မပြီးသေး ကိုငြိမ်းလဲအလွန်ပြီးချင်နေပြီ…“ဗကွ်..ဗကွ်…ဗကွ်..ဗကွ်…ဗကွ် “နဲ့ အရှိန်ကုန် မေဇင့်အားခါးမှ ကိုင်ကာ စောင့်ချက်ပြင်းပြင်းဖြစ်လိုးရင်းလိုးရင်း”မေ…မေ..မေ…..အားးးးးးးးးးးးးးးးးး…အ…အ…..” ဆိုသော အက်သံရှရှလေးဖြစ် မေဇင့်အဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်များ ဒလဟော ပန်းထုတ်လိုက်ပါရော …မေဇင်တယောက်မှီထားသောနံရံမှလွတ်ကာ ကိုငြိမ်း၏မထုတ်ရသေးသော လီးတန်းလန်းဖြစ် ဆိုဖာပေါ်သို့မှောက်ရက်လေးပြစ်လဲလိုက်သည်…ကိုငြိမ်းလဲ လီးတန်းလှန်းဖြစ် မေဇင့် အနောက်မှ တက်ရ်ျ မှောက်နေလိုက်တော့တယ်ချစ်သူနှစ်ဦး အစင်ပြေစွာပဲ တချိန်က အလွန်ရောက်လိုခဲ့သော ကာမပန်းတိုင်ကို အတူတူပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရောက်ရှိလို့ သွားပါတယ်….ကိုငြိမ်းကတော့ မှောက်လျက်အနေအထားနဲ့ မေဇင့် ကျောပြင်တွေလည်တိုင်လေးတွေ ဂုတ်သားလေးတွေကို ဖွဖွလေးလိုက်နမ်းလို့ နေတယ်…မေဇင်ကလဲ လက်နောက်ပြန်ပြီးကိုငြိမ်းဆံပင်တွေကြားထဲ လက်ချောင်းလေးတွေထိုးထည့်ကာ ဆံပင်တွေကိုတယုတယ ပွတ်ပေးလို့နေလေရဲ့ .ကို …ကို့ကိုတော့ မေဇင်အရမ်းချစ်သွားပြီကွား …မေဇင့်ကို တသက်လုံး…ဒီလိုပဲချစ်ပေးပါလားကို…နော်”“မေ ရယ် ကိုအောင်မင်းသိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ…ဘာဖြစ်လဲ …သိတော့ သူ့ကို ကွဲပြီး ကို့ကိုယူလိုက်မှာပေါ့နတ်ဆိုး တကောင်၏ကျေနပ်နေသောအပြုံးလေးဖြင့် ကိုငြိမ်းအားပြောစဉ်တဖက် အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ကစ်ကစ်လေး တဝါးဝါး နဲ့ ငိုချလိုက်သောအသံထွက်ပေါ်လာတော့သည်။